चार महिनापछि सञ्चालनमा आयो सार्वजनिक सवारीसाधन, यात्रुको संख्या भने कम| Corporate Nepal
Thursday, October 1, 2020 | बिहिबार १५ आश्विन, २०७७
चार महिनापछि सञ्चालनमा आयो सार्वजनिक सवारीसाधन, यात्रुको संख्या भने कम
साउन ८, २०७७ बिहिबार ११:०८
काठमाडौँ । झण्डै चार महिनादेखि थन्किएका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले आज करिव आधा सवारीसाधन सञ्चालन भएको जानकारी दिएको छ ।
पहिलो दिन बिहानैदेखि बस, मिनिबस, माइक्रो, टेम्पोलगायतका सवारीसाधन सञ्चालनमा आए पनि तीनमा यात्रु कम मात्रै देखिएको छ । अहिलेका लागि मर्मत भएका सवारीसाधन सञ्चालन भए पनि आगामी दिनमा थप सवारी साधन सडकमा आउने महासङ्घले जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको झण्डै दुई सातापछि मात्रै मजदूर र महासङ्घले सवारी साधन सञ्चालनको निर्णय गरेका थिए ।
अझै कतिपय गाडी ग्यारेजमा नै थन्किएर रहेको महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार मर्मतपछि बाँकी सवारी साधन पनि सञ्चालनमा आउनेछन् । चालक र सहचालकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सावधानीका सामग्री व्यवसायीले उपलब्ध गराएका छन् भने यात्रुलाई पनि माक्स अनिवार्यरुपमा लगाउनुपर्ने भनिएको छ । उनले भने, “सबै निकायले तोकिएको दायित्व पूरा गरेपछि सुरक्षित हुन सकिन्छ ।”
सरकारले साउनभर एउटा जिल्लाभित्र वा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सवारसाधन चलाउन पाउने निर्णय गरेको छ । यातायात व्यवसायीले भने सबै रुट खुल्ला गर्नुपर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था बिभागमा भनिरहेका छन् । महासचिव सिटौलाले भने, “कोही व्यक्ति नौबिसे आएर काठमाडौँ आउन नपाउने गर्नु हुँदैन ।”
यसअघि सरकार र व्यवसायीबीच यातायात श्रमिकको समूह कोरोना बीमाका लागि नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत र सम्बन्धित व्यवसायीले ५० प्रतिशत बीमाङ्क रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । त्यस्तै, यातायात श्रमिकको कोरोनाको कारण मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका लागि सरकारको तर्फबाट कोष स्थापना गराउने सहमति भएको थियो । त्यस्तै, श्रमिकको आवश्यक माक्स, पञ्जा, स्यानिटाजर र पिपिई व्यवसायीले नै उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
असोज १३, २०७७ मंगलबार
उदयमान व्यवसायीका 'एसेम्बलिङ प्लान्ट' बन्द, भन्सारले नै सामान रोकेर अघि बढ्न दिएन
टाटाका व्यवसायिक प्रयोजनका गाडि किन्ने हो ? सानिमा बैंकले सहुलियत कर्जा दिन्छ
असोज १०, २०७७ शनिबार
बजाज र टिभिएसले नेपालमै मोटरसाइल उत्पादन सुरु गरेपछि यामाहा र होण्डा पनि तयारीमा
टाटा मोटर्सको दशैं अफरः प्यासेन्जर गाडीमा रु चार लाखसम्मको नगद छुट
स्याङयोङ सुपर डिस्काउन्ट अफर, रु. तीन लाख छुट, एक्सचेन्जमा रु. दुई लाख बोनस
टाटा अल्ट्रोज प्रिमियम ह्याचब्याक अब नेपालमा, मूल्य जम्मा रु. ३० लाख
दुई दिन विदा दिने तयारीः के भन्छन् उद्योगी व्यवसायी ?
नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न ५० जनालाई पक्राउ गर्न सिआइबीलाई विभागको पत्र
कात्तिकदेखि दुई वटा सहकारीमा सदस्य बन्न नपाइने, दुई लाखसम्म जरिवाना हुने
असोज १४, २०७७ बुधबार
जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओमा ८ लाख १६ हजार ३६ जनाको आवेदन
जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ भर्ने अन्तिम दिन आज, ७ गुणा बढी परिसक्यो आवेदन
कात्तिक ७ देखि नै क्लिनफिड लागू हुन्छः प्रम ओली
विहीबारदेखि सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन हुँदै, कुन खाद्य वस्तुमा कति छुट ?
अब पनि बढी शुल्क लिए निजी ल्याबको दर्ता खारेज, यसअघि लिएको बढी रकमबारे मन्त्रालय मौन